Global Voices teny Malagasy » Serbia : Fisaintsainana momba ny fisalasalàna sy ny finoana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Aogositra 2020 8:52 GMT 1	 · Mpanoratra Sinisa Boljanovic Nandika (fr) i Boukary Konaté, avylavitra
Sokajy: Serbia, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Tantara
Ny Alahady 19 Aprily 2009 dia nankalaza ny Paska ireo mpino ôrtôdôksa . Tamin'io fotoana io dia nisy Serba bilaogera vitsivitsy naneho ny fandinihany ireo angano sy fotopinoana isankarazany mifamatotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Vojislav Stojković nanoratra ity [amin'ny fiteny serba] momba ny fisalasalàny sy ireo fitsanganan-ko velona ao anaty baiboly :
Ho an'ny filôzôfia sy ny siansa dia tokony hametrahana fisalasalàna daholo ny zavatra rehetra (dubitandum de omnibus). Heloka goavana eo anatrehan'ny fiangonana ny maneho fisalasalàna momba ny fitsangana-ko velon'i Jesosy. Noho ny fisian'ny fisalasalàna tahaka izany, betsaka ny olona maty nampijaliana sy nodorana teny ambony kitay nandritra ny ‘inquisition ‘. Saingy tany am-piandohana, ireo mpanaradia an'i Jesosy, indrindra fa ny iray tamin-dry zareo, Tomasy, dia nànana ihany koa fisalasalàna momba ny fitsanganan-ko velona. Vokany, tsy tokony ho heloka mihitsy ny fisalasalàna. Raha manana fisalasalàna aho, dia misaina aho izany. Raha misaina aho, dia misy aho izay (cogito, ergo sum). Isaky ny andro Paska, manontany tena aho ny amin'izay tsara indrindra – ny mino ve sa ny misalasala – ary raha toa ka mba afaka misafidy ihany ny olombelona ?
Tato ho ato dia nankalaza ny andro fety lehibe indrindra ho azy ireo ny kristiana – ny fitsanganan-ko velon'i Jesosy Kristy. Ho azy ireo, porofo tsy azo lavina ny maha-zanak'Andriamanitra an'i Jesosy avy any Nazareta ary nalefan'Andriamanitra izy mba hanavotra ny olombelona. Na ao anatin'ny evanjelin'i Md Jaona aza, voalaza fa hoe Jesosy no lahimatoan'ny maty (Apôk 1:5), tsy ny fitsanganan-ko velon'i Jesosy no hany tokana, na voalohany ao anatin'ny baiboly. Fa ny azy no malaza indrindra – saingy fotsiny ny azy dia fahafito.
Ny fitsanganan-ko velona voalohany dia ilay notanterahan'i Elia mpaminany ao anaty Testamenta Taloha. […] Ny faharoa dia notanterahan'i Elize mpaminany – na farafaharatsiny, ny fatiny izy tenany. […] Talohan'ny tena nitsanganany ho velona, olona telo no natsangan'i Jesosy avy tamin'ny fahafatesana. […] Voalohany, zazalahy iray no nakariny avy amin'ny maty, zanak'i Naina, ilay vehivavy mananontena. […] Ny fananganan-ko velona faharoa nataon'i Jesosy, ary fahadimy ao anaty baiboly, dia ny an'ilay zanakavavin'i Jairo (Lioka 8:49 – 55). […] Ny fahatelo – ny zavanahagaga indrindra vitan'i Jesosy sady ny fahenina ao anaty baiboly, dia ny an'i Lazarosy avy ao Vitania. […] Ny fahafito ary ny tena manandanja indrindra dia ny fitsanganan-ko velon'i Jesosy.
Araka ny fampianarana kristiana, hafa mihitsy tsy toy ireo hafa ity fitsanganan-ko velona farany ity satria i Kristy tenany no nitsangan-ko velona hiaina ny fiainana mandrakizay. Resiny ny fahafatesana. Noho io antony io no nanoratan'i Md Jaona mpitory filazantsara hoe i Kristy no lahimatoan'ny maty. […]
Any amin'ny faran'ny lahatsorany, averin'i Vojislav Stojković raisina izay nosoratany tany aloha :
[…] Araka izany ny fisalasalàna dia tsy tokony ho heloka satria ny fananana fisalasalàna dia midika fa “misaina aho” ary ny “misaona aho” dia midika fa “misy aho” (cogito, ergo sum). Ireo izay tsy manana fisalasalàna, mino izany ry zareo. Mifikitra mafy amin'ny finoany ry zareo amin'izao fotoana izao, efa ho taontajo roapolo mahery aty aorian'ireo tranga voalaza ao anaty baiboly na ny korany. […]
[…] Isaky ny andro Paska, manontany tena aho ny amin'izay tsara indrindra – ny mino ve sa ny misalasala – ary raha toa ka mba afaka misafidy amin'ny zavatra rehetra ny olombelona ? ? […]
Indro ny voalohany tamin'ireo fanehoankevitra 150 napetraka teo ambanin'io lahatsoratra io, avy amin'i Libkonz :
Mihevitra aho fa tsy tokony hanàla ny zon'ny olona ho afaka hisaina izany. Zavatra iray ny hoe izy manaiky an'Andriamanitra amin'ny fony, ary zavatra iray hafa ny hoe olona iray hafa no manery azy amin'izay tsy maintsy hoeritreretiny momba azy .
Valiny avy amin'i Vojislav Stojković :
Tsia, tsy hoe resaka fanerena hino ilay izy. Tsy misaina an'izay aho. Fa zavatra iray hafa, somary tsy misy dikany, no miditra an-tsehatra eto. Nahoana no ireo olona tena nahita fahalalàna amin'ny taonjato faha-21, na eo aza ireo zavamahagaga rehetra -teknika sy siantifika – no mbola manohy foana mino an'izay voasoratra tany amin'ny efa ho taonjato 20 mahery tany? Izany no fanontaniana mampiasa loha ahy.
Aleksandar Vasović nanoratra ity (amin'ny fiteny serba) momba ny fomba fijerin'ny silamo an'i Jesosy Kristy :
Jesosy, ao anatin'ny finoana silamo – Issa, dia solombavambahoaka notendren'Andriamanitra hitantana ny zanak'Israely ao anatin'ny Testamenta Vaovao (Indzil). Araka ny ambaran'ny Korany, niteraka an'i Issa i Maria (Maryam, Merjema) rehefa notorontoronin'ny Fanahy Masina. Fotoana nahafinaritra izany, teo ambany fiahian'i Allah. […]
Ampianarin'ny finoana silamo fa hiverina eto an-tany i Issa mba handamina sy hametraka ny rariny sy handresy ny anti-kristy mpaminany sandoka rehefa tonga ny Fitsaran'ny Andro Farany. Toy ireo rehetra mpaminany ao anaty finoana silamo, miozolmana i Issa satria nitory ny làla-marina sy ny hinoana Andriamanitra tokana. […]
Lavin'ny finoana silamo ny fampianaran'ny kristiana hoe zanak'Andriamanitra i Issa na hoe endrik'Andriamanitra hita maso, tondroiny fa olona toy ny rehetra izy ary nalefa mba hitory ny tenin'Andriamanitra, toy ireo mpaminany rehetra ihany.
Ao anatin'ny finoana silamo, manana anaram-boninahitra roa i Issa: Mesia sy Mpitondra Vaovao Mahafaly. Ampianarin'ny finoana silamo fa mpialoha làlana an'i Mahometa i Issa ary efa nilaza mialoha ny hahatongavan'ilay mpaminany [Mahometa].
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/22/149464/
 mpino ôrtôdôksa: http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
 nanoratra ity : http://blog.b92.net/text/9113/Sedmo%20vaskrsenje/
 nanoratra ity : http://blog.b92.net/text/9128/ISA/